"Ukuhamba" kunencazelo ehlukile | ISansan
Kuwo wonke umuntu, "ukuhamba" kunencazelo ehlukile. Ezinganeni ezingakhathali, ukuhamba kungadla isidlo sasemini esimnandi esenziwe ngumama uthando, futhi singadlala sijabule nabangane, empeleni yikho okujabulisa kakhulu. Kubo, incazelo yokuhamba kungenzeka kube “ukudlala” nokuthi “yidla”! Kwabasakhulayo abathandanayo okokuqala, ukuhamba kungadonswa phansi ngomfaniswano, kufakwe izigqoko zokuhlala bese uhlala ebhasini linye lokuvakasha nabantu obathandayo. Kubo ngaleso sikhathi, incazelo yokuhamba 'ukugqoka phezulu' 'nothando'; Kubantu abasha abasanda kungena emphakathini futhi abagcwele umoya wokulwa, ukuhamba kuyinto evamile. Izinhliziyo zabo zigcwele umdlandla, futhi abalindeli ukwazi ukuthi yiziphi izinto ezinhle eziseza. Yini okunye okubalulekile ukuthi bayinambithe futhi bayitadishe. Okwamanje, incazelo yokuhamba kade yahlukaniswa kusuka ku "dlala" nokuthi "uthando nothando"
, Kepha inencazelo ejulile. Kwabantu asebekhulile abanokuhlangenwe nakho okucebile empilweni, "ukuhamba" sekuyisikhathi eside kungasasebenzi. Ngokungafani nezingane ezihambela ukuzijabulisa, abafuni ukuthi abantu abasha baphishekele ngobumpumputhe lokho abanakho. Bafuna nje ukuyibona le enhle. Emhlabeni, ngifuna ukuchitha isikhathi esithe xaxa nomndeni wami futhi ngishiya izinkumbulo ezinhle kulempilo emifushane.
Lapho uhamba, uzobona izimbali nezitshalo ezingavamile, izinyoni nezilwane ezingakaze uzwe, izinto zomphakathi ongakaze uzizwe… Uzothola ukuthi ukuhamba kuyathandeka kakhulu. Ungaba nomuzwa wokuthi impilo ayilula ohambweni, wazi ukuthi ungakwazisa kanjani ukukhula kwezitshalo emifukeni, igobolondo lenyoka ephukile, ukuguqulwa kwe-cicada… Izigigaba ezahlukahlukene ezinhle, ezinye izinto azinakufundwa encwadini , ufuna ukutholakala kwangempela. Ukuthwebula lowo mzuzu omnandi, sebenzisa amehlo akho ukurekhoda, ukuthola. Ukuhamba kuyindlela yokuphumula ngokomoya. Uma ubheka isibhakabhaka esiluhlaza kanye notshani obukhulu, uzozizwa uphumule kakhulu, futhi umuzwa wakho uzoba ngcono. Umhlaba mkhulu, futhi uzowujabulela wedwa. Vumela umoya wakho undize, futhi vumela umoya omusha uzungeze. Ungalala ngokuthula nangokumnandi ephusheni elinokuthula. Ephusheni elihle kakhulu: amakha otshani abonakala enomqondo obumnandi.
Ukubaluleka kokuhamba ukuthi ungathola injongo yangempela yempilo, ungandisa ulwazi lwakho, ungathola izinto eziningi ezithokozisayo, ungazenza ukhohlwe futhi uvuseleleke
Isikhathi sokuthumela: Meyi-26-2020